လူဘန်ကာလုပ်မှာလား…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » လူဘန်ကာလုပ်မှာလား….
Posted by ၾကယ္ေလး on Jan 12, 2011 in Critic | 1 comment
အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်တယ်။၃နှစ်သင်တန်းအပြင်ကျောင်း(သို့)အလုပ်ကနေမွန်းမံသင်တန်းဆိုတာပြန်သွားရသေးတယ်။အဲဒီအတွက်စက်ရုံကပိုက်ဆံဖြတ်လို့မရဖူး။အချို့ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေဆိုသူတို့သင်တန်းသွားတာကိုမှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်လေးတောင်လုပ်လိုက်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုသင်တန်းသားတွေကိုသာမန်အချိန်မှာရှေ့တန်းခေါ်ခွင့်မရှိဖူး၁၉၉၆လောက်မှာမြောက်ကိုရီးယားရေငုပ်သင်္ဘောတောင်ကိုရီးယားထဲကတောင်ကုန်းပေါ်မှာစပိုင်လုပ်မဲ့ကွန်မန်ဒိုတွေကိုကမ်းကပ်ပြီးလာချတုန်းကျောက်ဆောင်နဲ့တိုက်ပြီးပြန်မရလို့အကုန်တောင်ပေါ်တင်သွားတာကိုတောနင်းရှာတော့စစ်မှုမထမ်းမနေရအပျော်တမ်းစစ်သားတယောက်ပါသွားတယ်..တောင်ပေါ်ရောက်တော့စစ်ဆင်ရေးအတွက်ပြောကြားနေတုန်းမြောက်ကိုရီးယားကွန်မန်ဒိုတယောက်ကအနောက်ကနေမွှေ့ ထည့်လိုက်တာ၉ယောက်လောက်သေပါရောလား။အဲ့ထဲမှာခုနကအပျော်တမ်းစစ်သားပါပါသွားပါရော။တနိုင်ငံလုံးပွက်လောကိုရိုက်သွားခဲ့တယ်..မြောက် တွေကိုရှာဖွေဖို့တောင်မှာစစ်သားအလုံအလောက်ရှိတဲ့အတွက်စစ်မှုမထမ်းမနေရကိုထုတ်သုံးခွင့်မရှိပါဖူး။ခေါ်သွားတဲ့ဗိုလ်မှုးအရေးယူမခံလိုက်ရပါဖူး။မြောက်ကွန်မန်ဒိုပစ်လိုက်တဲ့အထဲမှာသူပါပါသွားတဲ့အတွက်ပါ။သူတို့နိုင်ငံမှာကတိုင်းတပါးရန်တွန်းလှန်ကာကွယ်ရန်ဆိုတဲ့မျိုးချစ်စိတ်ကြောင့်စစ်မှုထမ်းရတာတရားတယ်..တောင်နဲ့မြောက်စစ်ကလည်းအချိန်မရွေးထဖြစ်နိုင်တာကိုး။အခြားနိုင်ငံတွေအတွက်တော့မလိုသလိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းမလိုပါဖူး။မြန်မာနိုင်ငံ ဟာလတ်တလောမှာတိုင်းတပါးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့အချိန်မရွေးစစ်ထဖြစ်စရာမလိုတဲ့အတွက်ပါ။ဒါဆိုဘာလို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတာကိုဘာလို့ပြဌာန်း ချင်ရတာလဲကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းဆွေးနွေးအဖြေမရှာပဲအာဏာရှင်ဝါဒခိုင်မြဲဖို့စစ်သားကိုမီးရထားဘူတာရုံတွေမှာရှာဖွေစုဆောင်းရတာလူပြောများလွန်းလို့တရားဝင်စစ်သားလုပ်နည်းထွင်လိုက်တာပါ.အထက်မှာပြောခဲ့သလိုတောင်နဲ့မြောက်အခြေအနေမျိုးပြည်ပရန်မရှိတဲ့အတွက်ဒီစနစ်မလိုပါဖူး။အခုသူတို့ပြ ဌာန်းချင်တာကအချင်းချင်းသတ်ဖို့ပါ။နိုင်ငံခြားနဲ့တိုက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်လည်းမလိုပါဖူး။ဒီစစ်သားတွေစစ်အာဏာရှင်တည်မြဲဖို့ပြည် တွင်းမှာပဲသုံးမှာပါတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ပေါ်တာနဲ့လူဘန်ကာအဖြစ်လောက်ပဲစည်းကမ်းစနစ်မရှိသုံးကြမှာပါ။လူဘန်ကာ တွေအဖြစ်မခံချင်ရင်ဒီဥပဒေမထွက်ခင်ထဲကကြိုကန်ကြဖို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။။
နအဖ စစ်တပ်ဖွဲ ့စည် းပုံအရ တပ်ရင် းတရင် းဟာ စစ်သာ ၇၇ရ ယောက်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တပ်ရင် းပေါင်းက ၅၀ဝ ခန် ့ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ၇၇ရ အမြောက် ၅၀ဝ ဟာ တပ်သား၃၈၈၅၀ဝ ( လေ းသိန် းနီ းပါ းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ) ကျနော်တို ့မနပုလောစစ်ဆင်ရေ းကာလမှာ တပ်ရင် းတရင် းဟာ ၆၀ဝ ကနေ ၇၇ရ ယောက်ကြာ းမှာရှိပါတယ်။ ခုတော့ တပ်ရင် းတရင် းဟာစစ်သား၆ဝ ကနေ ၁၂ဝ ခန် ့ပဲရှိပါတော့တယ်။
ဒါကြောင့် တပ်ရင်ပေါင်း၅၀ဝ အတွက် ဟာ တပ်သား၆သောင် းခန် ့ပဲရှိပါတော့တယ်။ ပိုပိုသာသာ ရဲတွေကိုပါပေါင် းလိုက်ရင်းတော့ တသိန်း၂သောင်းခန် ့ပဲရှိတော့တယ်လို့ခန် ့မှန် းနိင်ပါတယ်။
ဒီထဲမှာကလေ းစစ်သားတွေလည် းပါတယ်။ တိုင် းရင် းသာ းတွေနဲ ့အပြစ်ခတ်ရပ်စဲထာ းကာလ ၁၂ နစ်ခန် ့အတွင် းမှာ စစ်တပ်က တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ကျဆင် းလာတယ်။ စိတ်ဓါတ်အလွန်အမင် းကျဆင်လာတယ်။
ခေါင် းဆောင်တပ်မှုတွေရဲ ့လပ်စာ းမှုချစာ းမှုတွေ က အဆို းဝါ းဆုံ းဖြစ်လာတယ်။ ဥပမာ မြဝတီမှာတာဝန်ကျတဲ့စစ်ဗျူုဟာမှုဟာ တနေကိုဒေါလာ ၂သောင် းဝင်ငွေရှိတယ်။ ဒီအချိန်မှာတပ်သာ းအမျာ းစုကငတ်နေတယ်။ စုတ်ပြတ်နေတယ်။ ဒီကေဘီအေ တပ်မှုးဗိုလ်မှုစောလှဘွယ်က အောက်ခြေစစ်သာ းလေ းတွေရဲ ့ဘဝကိုသူကိုယ်ချင် းစာတယ်။ သနာ းတယ်လို ့တောင်ထုတ်ပြောရတဲ့အထိပါ။
ဒါကြောင့် ၁၂ နစ်ကျော်အတွင် းမှာ စစ်သား၂ သိန် းကျော်ထွက်ပြေ းသွာ းခဲ့ပြီဆိုတာ ကောက်ချက်ချနိင်ပါတယ်။ မြန်မာ စစ်တပ်က တခြာ းနိင်ငံတကာတပ်ဖွဲ့တွေလို အာဏာသိမ် းတာတွေဖြစ်ဖို ့ထက် အောက်ခြေက ပြို ကျသွာ းမဲ့အနေထာ းက ပိုမျာ းနေတယ်ဆိုတာကို ပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ထွက်ပြေ းတဲ့စစ်သာ းအမျာ းစုက ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင် းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်၊ ထိုင် းနိင်ငံတွေထဲကိုထွက်ပြေ းလာကြပြီ ရရာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်စာ းသောက်နေကြတယ်လို ့သိရပါတယ်။ အမျာ းစုကနယ်စပ်ဒေသ တဖက်နိင်ငံတွေရှိတဲ့ စိုက်ခင် းတွေမှာ စိုက်ပျိ းရေ းအလုပ်သမာ းတွေအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ စစ်မှုမထမ်းအမိန် ့ကိုထုတ်ပြန်လာတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ စစ်သာ းလိုအပ်နေတယ်။ ၈၈ အာဏာသိမ် းတော့ပါတီတွေထောင်ကျတယ်။ ကျနော်တို ့လူဘောင်သစ်ပါတီမှာ လူတိုင် းစစ်မှုမထမ် းမနေရ ကျင့်သုံ းမယ်လို ့ပေါလစီအနေနဲ့ပါပါတယ်။ ဒါကို ဒီအချိန်က နဝတ က မကြိုက်ဘူု း။ ကျနော်တို ဒီမိုကရေစီရ ရရင် ဒီပေါလစီကိုကျင့်သုံဖို့ထည့်တာကတော့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ် းတာ၊ စစ်ဝါဒ ကြီ းထွာ းလာမှုကို ထိမ် းညှိနိင်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ပါ။
ဒီနေ ့နအဖ က ဒီအမိန် ့ကိုထုတ်ပြန်လာတာကတော့ စစ်တပ်ဟာ စစ်အင်အားတသိန် းကျော်ပဲရှိတော့တယ်။ စစ်အင် းအာ းမလုံလောက်တော့ဘူး။ စစ်ဆင်ရေ းကြီ းတွေ လုပ်လာရင်သူတို ့မှာအင်အာ းမရှိတော့ဘူ း။